Igumbi le-Sunny Attic e-Newari House enhle - I-Airbnb
Igumbi le-Sunny Attic e-Newari House enhle
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Sailesh, Sohan, Nigen
Lesi sidleke esincane esikhanyayo siyindawo ekahle yokuphumula futhi ucwiliswe endaweni ye-Newari ye-Patan endala kuyilapho ujabulele ukuzola okukhulu. Inethala layo elincane elinophahla olunelanga, elilungele ukufunda, ukusebenza futhi ujabulele ikhofi ekuseni ;-)
Itholakala ngaphakathi kwendlu yaseYatachhen, iphrojekthi enhle yokongiwa kwezakhiwo zeNewari.
Indlu isilungiswe ngokuphelele/ yakhiwa kabusha eminyakeni eyi-10 edlule ngendlela yesimanje yokulwa nokuzamazama komhlaba kanye nokwengezwa kwamabhande kakhonkolo ukuze kuqinisekiswe ukuphepha okukhulu uma kuba nokuzamazama komhlaba.
Igumbi lokulala elilodwa elithandekayo elinendawo yokugezela enamathiselwe, indawo yokugcina, indawo yedeski elincane kanye nethala elinamathiselwe ngqo ophahleni. Ilungele umuntu osemsebenzini wokubonisana, ivolontiya noma isihambi esisodwa.
Ikamelo lizimele, linamathisele indawo yokugezela kanye nokufinyelela okugcwele endaweni enhle ophahleni kanye nekhishi kanye negumbi lokuphumula elinethezekile.
• Igumbi lokugezela elinamathiselwe elinebhavu ne-WC. Amanzi ashisayo aphuma kugiza wokugcina
• Ikhishi elivamile/igumbi lokuhlala ukuze uzipholele noma uziphekele ukudla kwakho
• Umshini wokuwasha
• Isipele sikagesi sokuphakelwa kukagesi usuku lonke
• I-WIFI yamahhala
• Ihitha yegesi ebusika
• Isethi yamahhala yamathawula namalineni ashintshwa njalo ngeviki
• Ukuhlanza kabili ngesonto
• I-Electronic Safety Locker yokugcina izinto zakho ezibalulekile.
Indawo enhle kakhulu: Indlu yakhelwe buthule ngemva kwesikwele saseSwotha, amamitha ambalwa ukusuka endaweni eyimilingo yefa lomhlaba le-UNESCO iPatan Durbar Square.
Ukuze uqalise kabusha:
• Itholakala enkabeni yedolobha lomlando lasePatan (Swotha Square)
• Kubekwe isidleke ngokuthula ngaphakathi kwegceke (akukho msindo ovela emgwaqeni!)
• Ngaphansi kwe-100m kude ne-Patan Durbar Square kanye neThempeli Legolide
• 500m kude ne-Patan Doka (isango lika-Patan)
I-Yatachhen House ngokwezwi nezwi isho ukuthi "ukuhlala eHarmony"... yizame!
I-Old Patan iyindawo enhle ongahlala kuyo. Iyiqiniso kakhulu futhi iyisiko kuneThamel noma i-Kathamndu egcwele abantu abaningi futhi engenamphefumulo kanye nehlathi lakhona elikhonkolo. Lapha, phakathi nendawo ye-UNESCO yamagugu, uzobe uzungezwe amagugu amaningi: amathempeli amaHindu yonke indawo, ama-stupas wamaBuddha, amagceke afihliwe, izindlela eziyimfihlo, izindlu zezindela, izindawo zokudla zendawo ...
Ngaphezu kwalokho, impilo yasendaweni enempilo yabantu baseNewars (iqembu lokuqala lesigodi saseKathmandu) ikuqinisekisa ulwazi lwamasiko olucebe kakhulu.
Sihlale sikujabulele ukusiza izivakashi zethu nganoma yini ezingase ziyidinge futhi sibe nengxoxo emnandi nazo.
Izivakashi zethu zingasithola kalula njalo ekuseni eHhovisi lethu elisendaweni ephansi ye-Yatachhen House.
Siphinde sakha ibhuku lokuqondisa elikhethekile oyolithola ekamelweni lakho lapho ufika. Uzothola lapho wonke amathiphu ethu ayimfihlo ukuze uhlale ngendlela emangalisayo;)
Izivakashi zethu zingasithola kalula njalo ekuseni eHhovisi let…